R & D wokuvavanya ulwazi - Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd.
Iqela lethu liye labandakanyeka kwi-R & D yeemveliso zamandla egesi ngaphezu kweminyaka engama-30 kumashishini aseChina adumile amakhulu okwenza imveliso;
Ngo-2000, wongamela walugqiba uphando kunye nophuhliso kunye nokuthengisa iseti ye-biogas generator, iprojekthi edumileyo yokuvundisa abantwana kushishino lokufuya lwasekhaya;
Ngo-2002, wongamela wagqibezela uyilo, ukugunyazisa kunye nokusebenza kwenkonzo yeprojekthi yokuvelisa umbane ye-3MW yasekhaya;
Ngo-2008. I-NPT yasekwa kwaye yafumana inani lamalungelo awodwa ombane wegesi;
Ukuza kuthi ga ngoku, impumelelo eqaqambileyo yenziwe, yenze impumelelo eqaqambileyo kwicandelo lamandla erhasi yasekhaya;
Inkampani ye-NPT ineenjineli ezininzi ezinamava angaphezulu kweminyaka engama-30 esebenza kwicandelo legesi kunye nomvelisi
Iqela le-R & D linokuqhuba noyilo lwemveliso ekhethekileyo kunye neengcebiso ngokweemfuno zomsebenzisi;
Ukubala kokulinganisa kokulinganisa;
Izinto eziphambili zenziwe ngokushicilelwa kwe-3D, okunciphisa kakhulu umjikelo weR & D;
Injini: ukuseka uloyiso-lokuphumelela kubuhlakani bobuhlakani kunye nabavelisi benjini abaziwayo ekhaya, ukwenza uphando ngokudibeneyo kunye nophuhliso, kunye nemveliso yekhomishini. Zonke iinjini zivela kwimigca yemveliso yabenzi benjini nabasekhaya abaziwayo;
Amalungu aphambili: sebenzisana namaziko ophando oqeqeshiweyo, iiyunivesithi, abenzi beenjini zohlobo lwasekhaya nabangaphandle ukuze bahambisane nobuchwephesha benjini yegesi, kwaye ukhethe kwaye utshatise iindawo eziphambili kwihlabathi liphela;
Injini yamkela inkqubo yomxube wegesi, inkqubo yolawulo kunye nenkqubo yokutshaya ngokuzimeleyo iyilelwe kwaye yalungiswa ngohlobo lweNPT. Injini inemisebenzi eyahlukeneyo enje ngokutsha okucekeceke, ucinezelo lwamandla aphezulu, ulawulo lolawulo lwamafutha omoya, ulawulo lwesantya somthwalo, ukuziqhelanisa nokuzifundisa.
Iseti yomvelisi wegesi inemisebenzi emininzi njengokuguqula okuzenzekelayo, uqhagamshelo lwegridi, ukusebenza ngokufanayo, ukuhanjiswa komthwalo, ukuhambisa umthwalo ngokuzenzekelayo, njl.